Announcement Archives - Scholar Institute | Scholar Institute
“Every Youth DeservesaQuality Education”
Home » Announcement	»
နွေရာသီ ကျေးလက်ဒေသ ပညာရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်နှင့် ပက်သက်ပြီး လက်တွဲဆောင်ရွက်လိုသော ဒေသခံများ/ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by winechit on Feb 17, 2016 in Announcement |
နေ့စွဲ – ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ Scholar Institute မှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ကျေးလက်ဒေသ ပညာရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အရ ယခုနှစ်နွေရာသီကာလ၌လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းစသည်တို့ရှိ ကျေးလက်ဒေသများမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက် နွေရာသီ သင်တန်းများပြုလုပ်သွားရန် ရည်ရွယ် ထားရှိပါသည်။ Scholar Institute အနေဖြင့် အဆိုပါ ကျေးလက်ဒေသ ပညာရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ ကို ၂၀၀၇ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ရာ ယခုအခါတွင်(၈)နှစ်တာ ကာလကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို(၈)နှစ်တာကာလအတွင်း၌ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းစသည့် ကျေးလက် ဒေသများရှိ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားလူငယ်လူရွယ်များ၏ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင် ပေးရန်ရည်ရွယ်လျက် အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်များနှင့် အတူ စကားပြောစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းများ လူငယ်များ၏ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းများ၊ အများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားစေရေးစသည် တို့ကို ဒေသခံများ/ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုနှစ်(၂၀၁၆)ခုနှစ် နွေရာသီကာလ၌လည်း ကျေးလက်ဒေသများတွင် ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းများ ကိုအခမဲ့ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ရာ၊ မိမိတို့ဒေသရှိလူငယ်လူရွယ်များအတွက် ဤကဲ့သို့သောသင်တန်များကို လိုလား ကြသောဒေသခံများ/ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်၍ လျှောက်လွှာများဖြင့် လျှောက် ထားကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။ လျှောက်လွှာများကို Scholar Institute ၏ ရုံးဖုန်းနံပါတ် (+၉၅၉၄၂၀၀၃၉၅၀၃)ကိုဖြစ်စေ၊ ဦးအောင်ရွှေဦး (+၉၅၉၂၅၄၁၆၉၅၅၆) ကိုဖြစ်စေ၊ institutescholar@gmail.com ကိုဖြစ်စေ ဆက်သွယ်တောင်းခံနိုင်ပြီး၊ ၂၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ နေ့ ၌ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ နေရာအကန့်အသတ်ရှိပါသဖြင့် သတ်မှတ် ရက်ထက် ကျော်လွန်ပြီးမှ ဆက်သွယ်လာသော လျှောက်လွှာများအား...
Training Invitation CV & Cover Letters
Posted by winechit on Jan 31, 2016 in Announcement |
Dear All, Scholar Institute is going to holdatraining “Guiding to writing CVs and Cover Letters” with the aim of building youth capacity. This training shall beahuge support to boost your capacity and skill for both work and academic purposes. From this training, the participants will learn how to write the CV & cover letter effectively and systematically for the successful application process. Please note that seats are limited. Therefore, if you would like to attend this training, please register to Aye Aye Khin (ayekhin@scholarinstitute.org, ph: 09971151055/09264251537) and Zin Maung Maung (zinmaung@scholarinstitute.org , ph: 09421733345) via Email or phone by December 30th, 2015. Trainer: Than Ei Nwe (Program Officer – CEP, Scholar Institute) Date: 1 January 2016 (Friday) Time: 3pm to 5pm Venue: Scholar Institute, Kawi Ponya (ကဝိပုည) Street, Myittarnyunt Quarter, Tamwe...
Scholarship Opportunities for Myanmar Students in 2016
Dear All, You are cordially invited to attend “Scholarship Opportunities for Myanmar Students in 2016” seminar at Scholar Institute. Speaker: U Aung Shwe Oo Venue : Scholar Institute, No.671, Ka Wi Pon Ya (က၀ိပုည) Street, Myinttar Nyunt, Tamwe Township, Yangon. Time : 8:30 AM to 9:30 AM 13 December, 2015 “U Aung Shwe Oo is currently working as the Program Head of Scholar Education Learning Center, Scholar Institute. He got Prospect Burma scholarship from 2011 to 2013 and persuaded his master degree in development management and governance at University of Philippines Los Banos, Philippines. The seminar will offer brief introduction of many scholarships for Myanmar students such as United World College (UWC), Prospect Burma (PB), Hong Kong University (HKU), Hong Kong Institute of Education (HKIED), Hong Kong Baptist University (HKBU), Lingnan University Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University and other scholarships.” If you are coming, please reserveaseat at scholarinstitute.selc@gmail.com or 09421733345, 09253354672 Remark: Scholarships Information are provided by U Soe Lay, Senior Program Manager, SSSELP, Thabyay Education...
No. 671, Kawipunya Street,
Tamwe Township, Yangon
Copyright © 2020 Scholar Institute. All Rights Reserved.